မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး အသည်းကွဲခဲ့ရတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ဘာကြောင့် ရိုင်နီယန် ကို ရှုံးနိမ့်သွား လဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ – Shwe Naung
မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး အသည်းကွဲခဲ့ရတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ဘာကြောင့် ရိုင်နီယန် ကို ရှုံးနိမ့်သွား လဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ
Shwe Thuta | October 31, 2020 | Celebrity | No Comments
ပြိုင်ပွဲ ဟာ သိပ်ကို စီးပွားရေး ဆန်လာ သလို ပြိုင်ဘက် အပေါ် အထင်သေးနေ ပါတယ် ။ အောင်လအန်ဆန်း ဟာ ကိုဗစ်ကူးစက် ခံထားရ လို့ ကြံ့ခိုင်မှု ပိုင်းမှာ မပြည့်ဝနိုင်သေး ပါဘူး။ နလန်ထူ ခါစပဲ ရှိပါသေ းတယ် ။ အောင်လအနေ နဲ့ကတော့ ချန်ပီယံ တစ်ဦး အနေ နဲ့ စိန်ခေါ်လာရင် သူဘာဖြစ်ဖြစ် အချိန်နေရာ ရွေ့နေမှာမဟုတ်တာ သေချာ ပါတယ် ။
သူလို ချန်ပီယံတိုင်း က စိတ်အားထန်သန်ကြ ပါတယ်။ ဒါက ချန်ပီယံ တွေရဲ့ စိန်ခေါ်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ အပေါ် တုန့်ပြန်တတ်တဲ့ သဘော သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Covid ကူးစက်ခံ ထားရတာက နလန်ထူခါစပဲ ရှိပါသေးတယ်လေ ။ ကြံ့ခိုင်မှု အတွက် အချိန်ယူ လေ့ကျင့် ဖို့ လိုအပ်နေသေးတာ ပါ။
ဒါကို ပွဲလက်ခံ စီစဉ် ကျင်းပမယ့် သူတွေကတော့ နားလည် သဘောပေါက်ပြီး အချိန်ယူဖို့ အလျင်စလို မလုပ်ဖို့ မိမိတို့ ကာယကံရှင်ဘက် က လက်ခံရင်တောင် လက်ခံမပြုသင့်သေးတာပါ ။ ဒီဟာတွေ ကို သူတို့ နားလည် သိရှိရ ပါမယ်။ ပြိုင်ဘက်ကလဲ အရမ်းကြီး မာကြောလွန်းနေတာ မဟုတ်ရ ပါဘူးဗျာ။ ဒါကို ပွဲလက်ခံစီစဉ်သူတွေက အချိန်မပေးဘဲ အလျင်စလို လုပ်တယ်။
ဒီနေ့ ရဲ့ ရှုံးပွဲဟာ ကိုဗစ် ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပါပဲ။ ပွဲကို အလျင်စလို လက်ခံစီစဉ် ကျင်းပသူတွေ ရဲ့ အပြစ်ကြောင့်လို့ မှတ်ယူလိုက် ပါတယ်။ အတိုက်ခိုက်ကောင်းတဲ့ ဖိုက်တာ ကို ချုပ်ကွက်နဲ့ ပဲ နိုင် နိုင်တယ် တစ်ဖက်က အဲ့တာကို အသုံးချသွားတာ ။ ယှဉ် ဖိုက်ရင် မနိုင် နိုင်ဘူးလေ အောင်လ ထိုးချက်နဲ့ ကန်ချက် မှာ အဖြူကောင်က ယိုင် ယိုင် သွားတာ ။ သူ့ အတွက် က အတင်း ဝင် လုံးဖို့ပဲ အခွင့်ရေး ရှိ တယ်။
ဘယ်လောက်တော် တဲ့ ဖိုက်တာ ဖြစ်ဖြစ် အပိုင်ချုပ်မိရင် မခံနိုင်ဘဲ အရှုံးပေး ရတာ ချည်း။ အောင်လ မညံ့ခဲ့ပါ ။ ပြိုင်ပွဲ ဆိုတာ အနိုင်ချည်းဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါ မထင်မှတ်ထား တာတွေ ကြုံလာစမြဲ။ အောင်လ ဖိုက်တင်း
Aung la က ခါးပတ် 2ခုရှိတာ covid ဖြစ်ထား လို့ အားမရှိသေးတော့ ခါးပတ် ၁ ခု ခဏ အငှားလွယ် ခိုင်းလိုက်တာပါ ပီးရင် ပြန်ယူ မှာ သိပ်ပျော်မနေ နဲ့ အဆင့်ရှိရှိမပြိုင်တဲ့ ots ရိုင်နီယာရေ ။
Credit- Zayyat Htet
ၿပိဳင္ပြဲ ဟာ သိပ္ကို စီးပြားေရး ဆန္လာ သလို ၿပိဳင္ဘက္ အေပၚ အထင္ေသးေန ပါတယ္ ။ ေအာင္လအန္ဆန္း ဟာ ကိုဗစ္ကူးစက္ ခံထားရ လို႔ ႀကံ့ခိုင္မႈ ပိုင္းမွာ မျပည့္ဝနိုင္ေသး ပါဘူး။ နလန္ထူ ခါစပဲ ရွိပါေသ းတယ္ ။ ေအာင္လအေန နဲ႕ကေတာ့ ခ်န္ပီယံ တစ္ဦး အေန နဲ႕ စိန္ေခၚလာရင္ သူဘာျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ေနရာ ေ႐ြ႕ေနမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာ ပါတယ္ ။
သူလို ခ်န္ပီယံတိုင္း က စိတ္အားထန္သန္ၾက ပါတယ္။ ဒါက ခ်န္ပီယံ ေတြရဲ႕ စိန္ေခၚတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ အေပၚ တုန႔္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Covid ကူးစက္ခံ ထားရတာက နလန္ထူခါစပဲ ရွိပါေသးတယ္ေလ ။ ႀကံ့ခိုင္မႈ အတြက္ အခ်ိန္ယူ ေလ့က်င့္ ဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတာ ပါ။
ဒါကို ပြဲလက္ခံ စီစဥ္ က်င္းပမယ့္ သူေတြကေတာ့ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး အခ်ိန္ယူဖို႔ အလ်င္စလို မလုပ္ဖို႔ မိမိတို႔ ကာယကံရွင္ဘက္ က လက္ခံရင္ေတာင္ လက္ခံမျပဳသင့္ေသးတာပါ ။ ဒီဟာေတြ ကို သူတို႔ နားလည္ သိရွိရ ပါမယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ကလဲ အရမ္းႀကီး မာေၾကာလြန္းေနတာ မဟုတ္ရ ပါဘူးဗ်ာ။ ဒါကို ပြဲလက္ခံစီစဥ္သူေတြက အခ်ိန္မေပးဘဲ အလ်င္စလို လုပ္တယ္။
ဒီေန႕ ရဲ႕ ရႈံးပြဲဟာ ကိုဗစ္ ရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပါပဲ။ ပြဲကို အလ်င္စလို လက္ခံစီစဥ္ က်င္းပသူေတြ ရဲ႕ အျပစ္ေၾကာင့္လို႔ မွတ္ယူလိုက္ ပါတယ္။ အတိုက္ခိုက္ေကာင္းတဲ့ ဖိုက္တာ ကို ခ်ဳပ္ကြက္နဲ႕ ပဲ နိုင္ နိုင္တယ္ တစ္ဖက္က အဲ့တာကို အသုံးခ်သြားတာ ။ ယွဥ္ ဖိုက္ရင္ မနိုင္ နိုင္ဘူးေလ ေအာင္လ ထိုးခ်က္နဲ႕ ကန္ခ်က္ မွာ အျဖဴေကာင္က ယိုင္ ယိုင္ သြားတာ ။ သူ႕ အတြက္ က အတင္း ဝင္ လုံးဖို႔ပဲ အခြင့္ေရး ရွိ တယ္။
ဘယ္ေလာက္ေတာ္ တဲ့ ဖိုက္တာ ျဖစ္ျဖစ္ အပိုင္ခ်ဳပ္မိရင္ မခံနိုင္ဘဲ အရႈံးေပး ရတာ ခ်ည္း။ ေအာင္လ မညံ့ခဲ့ပါ ။ ၿပိဳင္ပြဲ ဆိုတာ အနိုင္ခ်ည္းဘဲ မျဖစ္နိုင္ပါ မထင္မွတ္ထား တာေတြ ႀကဳံလာစၿမဲ။ ေအာင္လ ဖိုက္တင္း
Aung la က ခါးပတ္ 2ခုရွိတာ covid ျဖစ္ထား လို႔ အားမရွိေသးေတာ့ ခါးပတ္ ၁ ခု ခဏ အငွားလြယ္ ခိုင္းလိုက္တာပါ ပီးရင္ ျပန္ယူ မွာ သိပ္ေပ်ာ္မေန နဲ႕ အဆင့္ရွိရွိမၿပိဳင္တဲ့ ots ရိုင္နီယာေရ ။
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ဂေါ် ထွက်နေပြီး ကျစ်လစ် တောင့်တင်း တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပြသ လိုက်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ အ မိုက်စားVIDEO….
ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးများ…..
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
မော်ဒယ်လ် မိုးပွင့်ဖြူရဲ့ အလန်းစားပုံလေးများ….